Pcb Assembly Yemhando - Pandawill Technology Co, Ltd.
Pandawill ine yakarongeka maitiro ekudzora ayo anovimbisa iwo mhando yechigadzirwa chega chega kuburikidza napo nhanho yemaitiro. Iyo yemhando yekudzora sisitimu inosanganisira mutengesi kusarudzwa, basa-mu-kufambira mberi kuongororwa, kuongorora kwekupedzisira uye kushandira vatengi.
Maitiro aya ndeyekudzora vanotengesa, kuongorora zvinhu zvinouya, uye kubata matambudziko ehunhu gungano risati ratanga.
> Vatengesi runyorwa cheki uye mhando marekodhi anoongorora.
> Kuongorora kwezvinhu zvinouya.
> Monitor Yemhando Kudzora kwenzvimbo dzakaongororwa.
Maitiro aya anodzora gungano uye nzira yekuyedza kudzikisira kuitika kwekukanganisa.
> Chekutanga chibvumirano chekuongorora: kuongororwa kwezvakataurwa, kuendesa zvinodiwa, pamwe nehumwe hunyanzvi uye bhizinesi zvinhu.
> Kugadzira Kurovedzwa Kwekuvandudza: hwaro pane iyo data inopihwa nevatengi, dhipatimendi redu reinjiniya rinogadzira iyo yekupedzisira Kugadzira Kuraira, iyo inotsanangura iwo chaiwo maitiro ekugadzira uye matekinoroji anoshandiswa kugadzira chigadzirwa.
> Kugadzira Maitiro Ekutonga: tevera kuraira kwekugadzira uye yekuraira mirayiridzo kuverengera kuti iyo yose yekugadzira yakagadziriswa mhando inodzorwa. Izvi zvinosanganisira maitiro ekudzora uye kuyedza & kuongorora.
> Yekupedzisira yemhando yekuwongorora: ita inoonekwa uye inoshanda kuongorora, ita shuwa kuti inosangana nezvinodiwa nevatengi uye zvinodiwa.
> Kurongedza: kurongedza nemasaga eESD uye uve nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvakarongedzwa zvakanaka pakuendesa.